Gini Mere Ama Ama Ji Di Ukwuu? Ndumodu: Ọdịnaya, Ọchịchọ, mmekọrịta mmadụ na mmekọrịta ya na mgbanwe! | Martech Zone
Saturday, March 6, 2021 Tọzdee, Eprel 7, 2022 Douglas Karr
Ọtụtụ n'ime unu gara na blọgụ anyị n'ihi mbọ niile m na-agba ahịa infographics. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe… M hụrụ ha n'anya ma ha bụ ndị a ma ama. Enwere ọtụtụ ihe kpatara infographics ji arụ ọrụ nke ọma maka azụmaahịa azụmaahịa dijitalụ azụmaahịa:
visual - Ọkara nke ụbụrụ anyị na-etinye uche na ọhụụ na 90% nke ozi anyị jidere bụ ihe ọhụụ. Ihe osise, eserese, na foto bụ ihe dị egwu ị ga-eji gwa onye zụrụ gị okwu. 65% nke ndị bi na bụ ndị mmụta mmụta.
na ebe nchekwa - Omumu ihe achoputala na, mgbe ụbọchị atọ gasịrị, onye ọrụ jidere naanị 10-20% nke ederede ederede ma ọ bụ kwuo okwu mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 65% nke ozi anya.
nnyefe - canbụrụ nwere ike ịhụ onyonyo nke ga - adịru nanị ọnwa iri na atọ ma anya anyị nwere ike ịdebanye aha ihe ngosi 13 kwa elekere. Anyị nwere ike ịghọta ihe a ihe nkiri na-erughị 1/10 nke abụọ na visuals hazie 60,000X ngwa ngwa na ụbụrụ karịa ederede.
ọchụchọ - Ebe ọ bụ na ihe eserese na - ejikarị otu onyogho na - adị mfe ibipụta ma kesaa na ntanetị, ha na - emepụta backlinks nke na - eme ka ewu ewu dị elu yana, n'ikpeazụ, ogo nke ibe ahụ ị bipụtara.
Nkwupụta - Ihe omuma ihe eji eme nke oma nwere ike ime ihe siri ike ma kọwaa ya nye onye na-agu ya. Ọ bụ ọdịiche dị n'etiti ịnweta ndepụta nke ụzọ na ilele maapụ ụzọ.
ntụziaka - Ndị mmadụ n’eso ntụzịaka jiri ihe atụ na-eme ha 323% ka mma karịa ndị mmadụ n’eteghị ihe atụ. Anyị bụ ndị mmụta anya!
mbọn - Ihe omuma ihe eji eme nke oma na-etinye ahia nke ahia nke meputara ya, na-eme ka ndi mmadu mara banyere oru gi gburugburu web na saịtị di nkpa nke o kesara.
njikọ aka - Ihe omuma ihe omuma mara nma kariri ngọngọ nke ederede. Ndị mmadụ ga-enyocha ederede mana ha lekwasịrị anya na visuals n'ime isiokwu, na-enye nnukwu ohere iji mee ka ha nwee ihe ọmụma mara mma.
Oge-Oge - Ọbịa ndị hapụrụ gị na saịtị ahụ na-ahapụ n'ime 2-4 sekọnd. Site na obere oge dị otu a iji mee ka ndị ọbịa kwagide, visuals na infographics bụ nhọrọ ka mma iji jide nku anya ha.
Ịkekọrịta - A na-akọrọ onyogho na soshal midia karịa mmelite ederede. A na-enwe mmasị na mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi Ugboro ugboro 3 karịa ụdị ọdịnaya ọ bụla.
Ntughari - Ndị na-ere ahịa na-etolite nnukwu infographic nwere ike ịghachite eserese maka ihe nkiri na ngosi ha na ahịa, ọmụmụ ihe, akwụkwọ ọcha, ma ọ bụ jiri ha maka ntọala nke vidiyo na-akọwa.
Mgbanwe - Nnukwu ihe omuma ọ bụla na-ejegharị mmadụ site na echiche ahụ ma nyere aka mee ka ha nwee ike ịkpọ oku. Ndị na-ere ahịa B2B hụrụ infographics n'anya nke ukwuu n'ihi na ha nwere ike iweta nsogbu ahụ, azịza ya, ọdịiche ha, ọnụ ọgụgụ, akaebe, na ịkpọ oku ime ihe niile n'otu onyonyo!
Nakwa ịmepụta ihe ọmụma m maka saịtị m na ndị ahịa m, ana m agagharị na weebụ mgbe niile na-achọ infographics iji tinye na ọdịnaya m. Ọ ga-eju gị anya etu ọdịnaya gị ga-esi jiri ozi onye ọzọ rụọ ọrụ na edemede gị… yana nke ahụ gụnyere mgbe ịlaghachikwutere ha (nke ị kwesịrị).
Ihe omuma ihe omuma m ohuru nke enyere nye onye ahia bu ihe omuma mgbe ụmụ ọhụrụ nwetara ezé ha maka dọkịta ezé na-elekọta ụmụaka na Indianapolis. Ihe omuma ihe omuma bu ihe di egwu na ebe ndi ozo di ugbua na saiti ha, ihe kariri okara nke nleta nile na ebe ohuru ha.
Kpọtụrụ Highbridge maka nkọwapụta Infographic
Tags: mgbanwentụziakabiri ogenjikọ akankọwaImageAma ihe ngosiọnụ ọgụgụ infographicnnyefe oziihe omuma ihe omumaInfographics Ahịana ebe nchekwaịgbapụtasearch engine njikarịchaA-ekere òkèanyammụta mmụta
Sep 10, 2013 na 8: 23 AM
Ekwesịrị ịhụ ọrụ niile na-abanye n'ime ha n'anya, mana ịgụgharị ya nwere ike inye aka.
"peek search mmasị" ?????
Sep 10, 2013 na 10: 52 AM
Ndewo Douglas. Ahụrụ m akụkọ gị n'anya! Ọtụtụ stats na-adọrọ mmasị gbasara ngwa ọrụ a na-ewu ewu maka ịhụ data. Enweghị m ike iche maka ụzọ ka mma iji gosipụta arụmọrụ nke infographics karịa iji otu. M dabere na mpempe ọdịnaya gị ka m dee post m na Ọkara, ebe m kwuru gị. Echere m na ị ga-achọ iwepụ ya: https://medium.com/inbound-marketing-clinic-at-nyu/61033a96ea78. Karinne
Daalụ maka aha!
Sep 26, 2015 na 2: 35 AM
Nnukwu nchịkọta infographics! Ọ na-amasị m ị nweta akụkọ dum na-eji ihe ọ bụla ma ọ bụghị onyonyo. Nke ahụ na-adọrọ mmasị. Ha na-eto eto na ojiji nke ahụ bụ n'ezie!
Ọkt 18, 2015 na 11:38 AM
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozi a niile achọrọ m maka ọrụ m na ụlọ akwụkwọ. Ozi mara mma,
Ma site n'ụzọ ọ bụrụ na ị na-eche afọ ole m dị, a dị m nanị iri na otu na ama m ozi a n'anya nke ukwuu. Ezigbo ọrụ, Mr Douglas!!!!!!!!!!!!!
Ọkt 18, 2015 na 5:50 PM
Nke ahụ bụ ọmarịcha Amalshah! Daalụ maka ndetu… ị nwere ọrụ na-egbuke egbuke n'ihu gị.